အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် အဖြူရောင်နတ်သမီး...
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:09 PM
စကားလုံးတွေ တင်စားတက်လိုက်တာဗျာ လေးစားတယ်..သေလောက်တယ် :D
ကိုယ်လဲ အဖြူရောင်နတ်သမီး လေးနဲ့ရွှေဝါရောင် ပင်လယ်ထဲမှာကူးခတ်နေတာအတော်ကြာပေါ့..။
ငါ့ဘ၀ကို ငါသစ်ရမယ်…။ ငါ့ကိုယ်ငါဖန်ဆင်း ငါ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေ…။ ငါကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းမယ်။ လာမပြောနဲ့…။ ကိုယ့်အိပ်မက် ကိုယ်မျိုချ….။ ငါ့ဘ၀… နောင်တဆိုတာ မရှိစေရဘူး…။ ငါ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ငါထုပ်ပိုး။ အတိတ်ဆိုး ဆိုတာမရှိစေရ…။ ငါ့သွေးကြော ငါဖောက်ထုတ်…။ ဘာမှကြားထဲက ခေါင်းရှုပ်မခံနဲ့။ ငါမိုက်လို့ငါခံ ဘာမမှန်တာရှိလို့လဲ…။ ကိုယ့်အညွန့်ကို ကိုယ်ခူးစား…။ ဘယ်သူမှ မေတ္တာလာမထားနဲ့။ အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆုတွေတောင်းနေမဲ့ အစား...။ လာ….။ ကိုယ့်အခေါင်း ကိုယ်ထမ်းပြီး ငါနဲ့လိုက်ခဲ့…။ ဟိုဘက်ကမ်းမှာ သူတို့တွေရှိတယ်….။ ငါတို့ နောက်ကျနေပြီ….။
article ကတိုပေမယ့် နှစ်ခါပြန်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အပေါ်က စာသားတွေမှာ ပိုအကြိုက်တွေ့သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးပဲ ကိုယ်လိုက်ခဲ့မယ်။
ဘာ အလျင်လိုစရာမှ မရှိဘူး။ ကိုယ်နောက်ကျနေရင်
အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆုတွေတောင်းနေမဲ့ အစား...။ လာ….။ ကိုယ့်အခေါင်း ကိုယ်ထမ်းပြီး ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ A yan man de` sagar be`. Jesus ka blessing lote bo pots twe pyin htar hkying tal.
Buddha ka le pragmatism ko htar hkye tal.
No one can help unless we help ourselves first. ကျွန်တော်ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀လေးတစ်ခုအကြောင်း ka le san dal naw :P
philo twe ka myint tal byarr..You are getting better day by day hehe :)
we must lift ourselves up off the morgue table and tell the experts we are not yet dead. Bill Bigelow
အင်း ခုထိ အဖြူရောင် နတ်သမီး မရှိတော့လည်း ခက်တာပါပဲ..
အဖြူရောင် နတ်သမီး ထက်
ပန်းရောင် နတ်သမီးက ပိုလှတယ် :)
အားပါး စကားလုံးတွေ လန်ထွက်နေတယ်ဟေ့
အားရပါးရ ပဲ ၊ ကောင်းတယ်ဗျာ
အိမ်မက်တွေ နက်သထက်နက် လာပြီပေါ့
ကြိုက်တယ် သူငယ်ချင်းရေ အားပေးနေတယ် ။ ။
ကိုယ်ကိုကိုယ်တောင် အားမရဖြစ်လာဘီ ။ အိပ်မက်မည်းမည်း ရေ....
အရေးအသား က တော. လန်ထွက်နေတာပဲ ။။
ဘယ်လိုလေးလဲ မသိဘူး။ တော်တော် တော့ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကျွန်တော် ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးသော ဘ၀လေး အကြောင်းဆိုပါလားနော် ...း)
စကားလုံးနဲ့ အရေးအသားတွေကတော့ ဂွတ်ထပဲ သယ်ရင်းရေ...း)
အစ်ကိုရေစာသားတွေက လန်ထွက်နေတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ ဘာမှပြောတော့တာပဲကောင်းပါတယ်။ အဲလို လန်ထွက်နေအောင် ဘယ်ရိုရုပ်ရဲဟင်......
အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆုတွေတောင်းနေမဲ့ အစား...။ လာ….။ ကိုယ့်အခေါင်း ကိုယ်ထမ်းပြီး ငါနဲ့လိုက်ခဲ့…။
တစ်ပုဒ်လုံး ကြိုက်တယ် ... အဲဒီစာကြောင်း အကြိုက်ဆုံးပဲ ..။
အဖြူရောင်နတ်သမီးကိုတောင် တွေ့ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ် ..ပြောင်မြောက်လိုက်တာ .. တင်စားမှုတွေကတော့ ..
ငါ့လှေ ငါထိုး ငရဲအိုးထဲရောက်ရောက် .
I'm reading your post from uni!
Really feel great as Angels are dancing not only around but also in your body !
But be fix with the best angel forever asap. :D
စကားလုံးတွေ က လန်ထွက်နေတယ်ဗျာ အရေးသားတွေရှယ်ပဲ အားကျတယ် အားကျတယ် မနာလိုဘူး အစ်ကို့ လိုမရေးတတ်လို့ ။ ကိုယ့်အခေါင်း ကိုယ်ထမ်းပြီး ငါနဲ့လိုက်ခဲ့…။ ဟိုဘက်ကမ်းမှာ သူတို့တွေရှိတယ်…ဘယ်သူတွေလည်း အဖြူရောင် နတ်သမီးလေးတွေလား ဒါဆို ကျနော့်လည်း ခေါ် =)
ငါတို့ နောက်ကျနေတာတော့အမှန်ပဲ..ဒါပေမယ့်..မင်းသိပါတယ်.အိမ်မက်နက်ရေ..အဓိက က ပန်းတိုင်မို့လား?လာ..သူငယ်ချင်း....ဆက်လျှောက်မယ်
I DON'T KNOW WHERE TO START.....JIT
YOU ARE MR. EXTRA EXTRA.....
NO ONE KNOWS WHAT YOU ARE CAPABLE OF COZ ALL THE TIME YOU SURPIRSE PEOPLE.
I HEARD WORDS ARE FOR EXPRESSION BUT YOU MR. INJECTED - VOICES, SHADOWS, COLOURS & ANGLES INTO THOSE WORDS AND CREATE AN ART LIKE NO OTHERS! LOVE YOUR WORK & YOU!
DON'T EVER DROP YOUR THOUGHTS ELSE WHERE BUT ON THIS BLOG. COZ YOU HAVE ME :)
chae yar yaw lat yar yaw arr lone chan twar tel naw..:P
ါ့ဘ၀ကို ငါသစ်ရမယ်…။ ငါ့ကိုယ်ငါဖန်ဆင်း ငါ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေ…။ ငါကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းမယ်။ လာမပြောနဲ့…။ ကိုယ့်အိပ်မက် ကိုယ်မျိုချ….။ ငါ့ဘ၀… နောင်တဆိုတာ မရှိစေရဘူး…။ ငါ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ငါထုပ်ပိုး။ အတိတ်ဆိုး ဆိုတာမရှိစေရ…။ ငါ့သွေးကြော ငါဖောက်ထုတ်…။ ဘာမှကြားထဲက ခေါင်းရှုပ်မခံနဲ့။ ငါမိုက်လို့ငါခံ ဘာမမှန်တာရှိလို့လဲ…။ ကိုယ့်အညွန့်ကို ကိုယ်ခူးစား…။ ဘယ်သူမှ မေတ္တာလာမထားနဲ့။ အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆုတွေတောင်းနေမဲ့ အစား...။
i don't have white angle
i have brown angle
၂ ခါပြန်ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျာ ... ;-)
စကားလုံးတွေကတော့ အလမ်းတွေပဲ ..
What and amazing art work! your words are really nice and concrete..
မှန်လိုက်လေနော်...သွေးထွက်အောင်ကိုမှန်တယ်။ အတူသွားကြဖို့ တခြားသူတွေကိုပါ လိုက်နှိုးဆော် လိုက်အုံးမယ်နော်.......
အဲဒါ ရေးနေချိန်မှာ မငိုဘူးလားဟင်.....?
ဒီလိုအရေးအသား က ခံစားချက်ရှိ မှ ဗျ............